I-PIVX iqalisa inkqubo yokuqala ye-Strive Staking System ye-World-zPOS | PIVX
I-PIVX imise ibha kwakhona ngokuba yi-cryptocurrency yokuqala yokunika ubungqina bobuNko boBucala beNgcaciso kunye ne-update yabo yakamuva kwi-Core Wallet 3.1. Olu hlaziyo lunikeza abasebenzisi amandla okufumana imivuzo ye-stPs yabo ye-zPIV, ngo-staking zPIV ngokusebenzisa elinye iqhinga lokukhuphela i-crypto-lokuqala elibizwa ngokuba yi-zPoS-Zerocoin-protocol-enabled proof of Stake.
Ayikho enye i-cryptocurrency eyimfihlo yecala-mali ayiyikufeza le ngxaki yobugcisa. Kuze kube yimanje, ezinye iimali zemfihlo kwiimarike ziye zakwazi ukunikela ngokuthengiswa kwangasese ngokusebenzisa izilungiso zobungqina bokumbiwa kwemigodi. Oku kuthetha ukuba i-PIVX ngoku inikezela ngokungaziwayo ngokupheleleyo kunye neMigodi ye-PoS.
Kwabaninzi, ukumbiwa kwembambano-mbambano (PoS) kunomnye othakazelisayo kunye onokubakhokhela imali kumsebenzi wokumbiwa kwemigodi. Ngeendlela ezininzi, i-PoS ininzi efana nokufumana inzala kwi-akhawunti yebhanki okanye ukufumana izabelo kwiimarike zamasheya. Ngokuthatha inxaxheba kwinethiwekhi, ufumana imivuzo njengemigodi.
Ukuqonda i-zPIV: Izixhobo zobumfihlo zobuninzi beCasino
I-PIVX isebenzisa uhlobo oluthile lwemali olubizwa nge-zPIV, olusebenzisa umgaqo-nkqubo weZerocoin ukufezekisa ukungaziwa ngokupheleleyo kwi-blockchain. Kwi-wallet, abasebenzisi bangakhetha ukudala okanye “ii-unit” ze-zPIV. i-zPIV iza kwiinkonzo ezithile kuphela, njenge-1, 5, 10, njalo njalo. Oku kufana nendlela imali esebenza ngayo.
Xa umsebenzisi ethumela i-zPIV, umamkeli ufumana i-PIV rhoqo, kodwa engakwazi ukuxelela apho ivela khona (# engaziwa). iiyunithi ze-zPIV zikhona kuphela kwi-PIVX yesikhwama kwaye asikwazi ukuthengwa ngqo okanye ukuthengiswa ngokutshintshiselana. Ixabiso labo lilingana ngokusisigxina kwi-PIV kwinqanaba eli-1 ukuya ku-1. Ethetha ngokukodwa, i-zPIV ayinayo imali yayo kodwa ifana ne-casino chip engabonakaliyo ngokungahambelani ngokuxabisa ubuso bayo.
Cinga ngale ndlela: Ukuthumela i-Bitcoin kufana nokuthumela ibhanki kwi-akhawunti yomntu webbhanki. Ibhanki inerekhodi yezinto ezenzekile, kwaye ziyakwazi ukubhekisela kulo naliphi na ixesha. Ukusebenzisa i-zPIV kufana nokurhoxisa imali kwi-ATM, ukunikezela komntu, kwaye ubenayo idibanise imali kwi-akhawunti yabo yasebhanki.
Ubumfihlo kunye ne-PoS, kunye neZPOS
Njengomxholo omkhulu kwinguqu yakutsha ye-PIVX isikhwama, inguqulelo 3.1 ekhishwe ekuqaleni-ngoMeyi 2018, abasebenzisi banokungena kwi-zPIV yabo kwaye bafumane ukubuyela rhoqo kuyo. Kwisikhululo samva nje, i-PIVX Inkokheli yoluntu uBrian Doreian yathi:
“I-zPoS iyona nyathelo eliphambili kwi-teknoloji ye-cryptocurrency ngokubanzi ngenxa yokuba inika inkululeko yokugcina izilinganiso ze-crypto zangasese (nge-zPIV), kunye nokufumana umvuzo ngokuzimeleyo nangokukhuselekileyo. Kuyafana nokuba neakhawunti yakho yokukhula komntu, ngaphandle kwamehlo abonakalisa abagculeli, abagxeki, kunye nezinye izinto eziza kuhlola iinkcukacha zakho kwaye zizisebenzise ngeenjongo zazo. “
IUkongeza kwizinto ezintsha zobumfihlo, abo batyunayo i-zPIV (endaweni ye-PIV rhoqo) baya kufumana isabelo esikhulu somvuzo webhloko ngokwenza njalo.
Kutheni ukwandisa umvuzo?
Abantu abangaphezulu kwinethiwekhi abasebenzisa i-ZPIV, ephakamileyo ukungaziwa kunye nokukhuselwa kwenethiwekhi njengelonke.
Okwesibini, ukuguqula i-PIVX kwi-zPIV kungenzi imali encinci yemitha efaniswa nomrhumo we-PIVX. Ukwandisa umvuzo webhloko we-staking zPIV kunceda ukukhutshisa kwaye udibanise ngokugcwele le myinge yindleko.
Ekugqibeleni njengokusebenzisa i-zPIV idinga umzamo ongezelelweyo kwinxalenye yomsebenzisi, iqela le-PIVX livakalelwa kukuba abasebenzisi ababandakanyekayo ne-zPIV kufuneka bavuzwe ngokwenza njalo.
i-zPoS ayikho nje iqhinga elipholileyo.
Kunoko isinyathelo esona siphumelelo sobuchwepheshe be-cryptocurrency ngokubanzi-kwaye i-PIVX ibangela indlela.
UBUYAZI? Izixhobo zendlela entsha 3.1.0.2